ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ shell Careers
စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်း Careers - ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းယနေ့တွင် Upload လုပ်ပါ! 🥇
စက်တင်ဘာလ 30, 2018
Dubaj Praca - Zatoce Perskiej w Aplikuj Do Pracy! 🥇
နိုဝင်ဘာလ 3, 2018
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at အောက်တိုဘာလ 29, 2018
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက် shell Careers
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက် shell Careers။ ဒါကကုမ္ပဏီ ယခုငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ။ နှင့်ဤအတူစိတ်တွင်, အလုပ်မလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ Shell ကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်, အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ် တော်မူသောငါတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးရှိသင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရောက်ရှိဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ။ သေချာအပေါငျးတို့သကျော်ဘို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ဈေးကွက်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှစီမံခန့်ခွဲထားပါတယ် လူ့အရင်းအမြစ်များကိုဌာနကိုဆက်သွယ်။ ထိုအကြှနျုပျတို့သညျဤကုမ္ပဏီထံမှတောင်းဆိုချက်တစ်ခုလက်ခံရရှိပါပြီ။ နှင့်သင်တန်းအတွက် data တွေကိုတိုက်ရိုက်မန်နေဂျာနှင့်အတူ ဗြိတိန်အတွက်ရှဲလ်ကုမ္ပဏီ.
သငျသညျလိမ့်မည်အောက်တွင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုတွေအများကြီးတွေ့ပါ။ ထိုအဟုတ်, သင်တန်း, ဒီကုမ္ပဏီကိုမျှော်လင့်နေပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဘကိုရှာဖွေသူများငှားရမ်း။ သင်အမှန်တကယ်မှ လာ. အဘယ်အရပ်နေပါစေရှိပါသည်။ အဆိုပါ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မန်နေဂျာကိုယ်စားလှယ်လောင်းလွှဲပြောင်းဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ် အိန္ဒိယကနေ။ အဖြစ်ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကို။ ဒါကြောင့်အီးမေးလ်အပေါ်ပြန်ကြားချက်တစ်နည်းနည်းရှိတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကြောင်းပေါ်ပေးဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကြော်ငြာ။ စိတ်၌ဤအတူငါတို့သည်သင်တို့ယောက်ျားတွေများအတွက်ပို့စ်တင်ထားပါသည် စိတ်ဝင်စားမယ့်အခွင့်အလမ်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်။ သင်တန်း၏, ယခုအချိန်တွင်ကအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဤရရန်ကြိုးစား အခွင့်အရေး အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။
VACANCY SHELL Oil & Gas ကုမ္ပဏီဗြိတိန်ဖွင့်လှစ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောဆိုခြင်း, အတွေ့အကြုံများ:2-5Yrs
SHELL Oil & Gas COMPANY (ဗြိတိန်)
Website: Shell က UK မှာအလုပ်အကိုင်များ
ကမ်းလွန်ကြမ်းပြင်လက် / ROUGHNECKS
အလုပ်အမှုဆောင် (Project မှအင်ဂျင်နီယာချုပ်စက်မှု)
ကမ်းလွန်တပ်ဆင်ခြင်း Manager ကို
ရေကြောင်းလျှပ်စစ်အရာရှိနှင့် eto - ရေနံကမ်းလွန်ရိန်း
ကမ်းလွန် Drilling ကြီးကြပ်ရေးမှူး
ကမ်းလွန် LIFT Technician အ
ကမ်းလွန်ဆောက်လုပ်ရေး Manager ကို (OCM) / ကြီးကြပ်ရေးမှူး
စိတ်ဝင်စားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသူတို့ရဲ့ CV ကို FORWARD သင့် Shell ကဝဘ်ဆိုဒ်
ယခုကြှနျုပျတို့ပေးနေကြတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးအဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။